"हिजोसम्म जो रोईरोई बाँचिरहेका थिए
आज तिनै हाँसीहाँसी मर्न तयार छन् …"
क्याम्पस प्रवेशको कलकलाउँदो बेला थियो त्यो । नेपाली विषयको कक्षामा युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले ठाडै हमला गरे कवितामार्फत । युवा जोस र पखेटा आकाशतिर उचालिएको सोच भएर होला , त्यो बलशाली कविताले आफूमा निकै तरङ्ग पैदा गर्यो । 'परिवर्तन' शीर्षकको कविता थियो त्यो । अहिले परिवर्तनको सामयिक गन्तीको आँधीवेहरी पार गर्दै आफैँ समेत परिवर्तित रुपमा आइपुग्दा पनि कविता भने मानसपटलमा बाफिइरहेकै छ अझै ।
परिवर्तनको आफ्नै चरण हुन्छ परिवर्तनको वहाबलाई बुझ्ने विभिन्न बाटो हुन्छन् । कुनै प्रत्यक्ष त कुनै घुमाउरो रेखा । मैले भने त्यही छोटो कविताको रापबाट परिवर्तनको तापक्रम नापेँ होला ।
बलिदानको वेग र त्यसैमार्फत विद्रोहको ज्वरोलाई कवितात्मक डिग्रीले नापेका छन् कविले यसमा । यसपछि पनि कविता तन्किएर अघि बढ्छ तर मलाई भने यही दुई हरफ यादगार छ । रोईरोई बाँच्नुको बन्दी विवशतालाई हाँसीहाँसी मरेर नामेट पार्न चाहन्छन् जनता ।
परिवर्तन चाहिन्छ - समाजमा देशमा विश्वमा । अझ चलनचल्तीको भाषामा भनिन्छ "परिवर्तन हुनुपर्छ ।" नेताजीहरुको ब्रेक नभएको जिभ्रो यो गर्नुपर्छ र त्यस्तो नगर्नु फजुल हो भन्दै नानाथरी कुराहरुको किनारमा फड्कारिए जस्तै परिवर्तनको नारा पनि जथाभावी बतासिइरहेछ । भुराभुरी नेताहरु टोल समाज र घरघरमै छ्यासछ्यास्ती जन्मिएका छन् ।
परिवर्तनको रन्कोले त पछिल्लो समय सिङ्गो मुलुकलाई नै छोएको हो । सिरमा हुनेहरु बल्ढ्याङ खाएर एकैचोटि पाउमा झरे, सडकका मान्छे शासक भए । सोझो रुपमा जनमानसले बुझ्दा ठूलै बदली आयो राष्ट्रिय मौसममा । तर लुगा धुने धोबीले आफ्नै रीतमा लुगा धोइरह्यो लुगा सुकिरह्यो आफ्नै ढङ्गमा । परिवर्तनपछि लुगा धुने मान्छेले लुगै धुन छाडेर उपरखुट्टी लगाउन पाउनुपर्छ भन्ने होइन । धोबीको कोठामा धाराको टुटी जोडिन नसक्ला एउटा कुवा त बनोस् । तर तर परिवर्तनको आभास सबैले उपरखुट्टी लगाएर 'परमानन्द गर्ने' रुपमा बुझ्न चाहे, यस्तै फल ग्रहण गर्न इच्छा राखे ।
सबैलाई लाग्दो हो- म यो भन्दा बढी गर्न सक्छु चाहन्छु । खोइ मैले उडान भर्ने आकाश यो साँगुरो बाकसभरिको आयतन मेरो होइन । म सुन्निएर पड्किजाने बेलुन होइन तर सधैँ उस्तै सुकेनासमा ठोस रहिरहने बेमौसमी काँक्रा पनि होइन । लाग्दो हो यस्तैयस्तै … । तर के त बन्द बाकसदेखि बाहिर चिहाउन परिवर्तन भनिँदो ती ज्वालामुखी विस्फोटबाट कुनै चिरा फुटेको छ
परिवर्तन भन्नु बिहानको चटनी-भात र बेलुकीको भात-चटनीको उल्टापुल्टामा मापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । दैनिक उही रुटमा उही लोकल बसको शरणागत भई कार्यालय धाउनु । दैनिक उही भात होटलको बेन्च तातो पार्नु । दैनिक 'केही गरौँ' भन्ने हाकिमको थेगोमा अभ्यस्त हुनु । दैनिक सहकर्मीहरुको निरपेक्ष सङ्गतिबाट न साथ भइएको न विरानिएको अनुभूतिमा टोलाउनु । दैनिक 'अब त छुट्टी त भो' भन्ने बोलीमा हाइ काढ्दै चिसिएर कार्यकक्षबाट ओरालो झर्नु ।
परिवर्तनको भुलभुलैयामा हामी जिन्दगीको राजपथमा चक्रपथभन्दा टाढा कतै मोडिन भ्याएका छैनौँ । चक्रपथको उही भाउन्न पार्ने चक्कर । सीमित ।
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, March 07, 2010
Labels: अनुभूति, समय-सन्दर्भ
प्रबिण थापा March 07, 2010
chitta bujdo kura
विष्णु प्याकुरेल March 07, 2010
परिवर्तन भन्नु बिहानको चटनी-भात र बेलुकीको भात-चटनीको उल्टापुल्टामा मापन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अनी जीन्दगीको उही चक्रपथे राजपथ । अती चित्त बुझ्दो लाग्यो । साह्रै चोटिलो प्रहार छ तर राजनीतिमा भावना र भावनाको अराजक राजनीति भित्र तपाइ हामी चुर्लुम्म डुबीसकेका छन निकास हिन बाढीको बेगमा ।
लेखन अझै प्रहारमुलक बन्दै जावोस् ।
Dhruba Panthi March 07, 2010
परिवर्तन... उफ्! शब्द आफै रुँदै होला बिचरा! फलाक्नेहरुले परिवर्तन, रुपान्तरण, अग्रगमन आदि जे-जे फलाके पनि हामीहरुले भोगिरहेको त केवल पाखण्ड मात्रै हो, कहिले कसको, कहिले कसको। जे होस्, व्यक्तिगत जीवन र देशको स्थितिलाई सँगसँगै राखेर लेख्नुभएको परिवर्तनको सवाइ सटिक छ।
‘हिँड्नुअघि’मा कवि सुको साइबर
राराको सङ्लो पानी… (प्रेमबाहिर पत्रहरू)
समाचारको सेरोफेरोमा बोल्ड म्यान कोइराला
यस्तै लेखिएको रहेछ
पर्खाइको किनारामा डुबाउने साँझ
लोडसेडिङको बहार !!
सपनाको काटिएको प्वाँख
हेलु ऽऽ हेलु हेलु ऽऽऽ सुनिस् काठमाडौँ !! ?